China Soft PVC Pencil Toppers orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Ny pensily dia fitaovana hanoratana, hanaovana sary na hanaovana famoronana, ny pensilihazo pensilihazo PVC malefaka no fitaovana hanamboarana ny asa soranao, ny sarinao ary ny zavaboarinao mahaliana sy lafatra kokoa.
Ny pensily dia fitaovana fanoratana, fanaovana sary na fanaovana zavaboary, ny malefaka Kitapo pensilihazo PVCno fitaovana hahatonga ny asa soranao, ny sarinao ary ny zavaboarinao hahaliana sy lafatra kokoa. Tsy ny ankizy ihany fa ny olon-dehibe koa dia mankafy ireo tarehimarika mahafinaritra izay noforonin'ny marika lehibe malaza toa an'i Disney sy ny hafa. Ny malefakaKitapo pensilihazo PVCazo amboarina amin'ireo sary mahafatifaty ireo amin'ny habe, endrika ary loko isan-karazany. Izy ireo dia ampiasaina ho fanomezana fampiroboroboana, fahatsiarovana, haingon-trano, dokam-barotra sns. Ireo toppers kely malefaka amin'ny PVC dia nanao doka tsara ireo fanahy malaza marika, ary miaro ny pensilihazo sy ny mpampiasa ihany koa. Ny pensilihazo pensilihazo vita amin'ny lamba malefaka sasany dia manana ny famafana. Manampy ny mpampiasa hanadio tsara ny soratra izy ireo, ny sary ary ny zavaboary rehetra ary hahatonga azy ireo ho lavorary kokoa.
Tongasoa ny endrika, ny endrika ary ny haben'ny mpanjifa. Hanao asa tanana ho an'ny fankatoavana anao alohan'ny santionany na famokarana izahay, hiezaka ny tsara indrindra hanehoana ny pitsopitsony amin'ny sosokevitra arak'asa, ary hiezaka ny hanana orinasa bebe kokoa ho antsika roa.
Antony: Die Struck amin'ny 3D feno, ny endrika sy ny habe dia azo alamina.
Famaranana: Ny logo dia azo atao pirinty, voasokitra, Laser voasokitra sns
MOQ: 500 pcs isaky ny famolavolana
Teo aloha: Magnetan'ny vata fampangatsiahana PVC malefaka
Manaraka: Medaly PVC malefaka
Tavoahangy pensilihazo 3D
Kolotra pensilihazo miloko
Topper TPR manokana
Kitapo pensilihazo PVC